Fikarakarana voaloboka | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Fikarakarana voaloboka
Ny fahavokarana volomparasy amin'ny fararano dia zava-dehibe sy manan-danja.
Ny mponin'ny lohataona rehetra dia manana drafitra hambolena eo amin'ny toerana misy azy ireo. Ny tsimok'aretina voaloboka dia zavamaniry iray izay mamolavola tanteraka tarehy, ary mitondra soa avy amin'ny fitomboany. Ny vokatra dia tena voajanahary izay mamboly. Ny fikarohana momba ny fambolena an'io zavamaniry io amin'ny taona fahiny, dia hita any amin'ireo faritra akaikin'ny Ranomasina Mediterane, ao Crimea ary any Azia Afovoany.
Fikarakarana voaloboka amin'ny fararano: fitsipika sy toro-hevitra
Amin'ny fararano dia mila karakaraina tsara ny voaloboka. Efa nanome ny heriny rehetra izy io mba hanamafisana ny vokatra, ary ny asa lehibe indrindra ho an'ny mpamboly dia ny hanomana tsara ny vokatra mandritra ny fitsaharana amin'ny ririnina. Azo antoka fa efa naheno imbetsaka ianao fa tany amin'ny faritra iray dia nipoitra ny voaloboka, ary tamin'ny ririnina dia tsara ny ririnina. Nahoana no miankina tanteraka amin'ny karazany samihafa izany?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fikarakarana voaloboka